स्काइपमा पोडकास्ट साक्षात्कार कसरी रेकर्ड गर्ने Martech Zone
शनिबार, मे 23, 2015 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अब हामीसँग हाम्रा दुई विशेषज्ञ अन्तर्वार्ता श्रृंखलाहरू छन् हाम्रो पोडकास्ट र यो अविश्वसनीय राम्रोसँग गएको छ। हामीसँग पहिले नै छ वेब रेडियोको किनारा जुन एक सफलता हो र साइट रणनीतिहरुमा हाम्रो साझेदारहरु संग साझेदारीमा। कहिलेकाँही, हामी वास्तवमै एक साथ गहिरा गोता लिन चाहन्थ्यौं विशेषज्ञ जबकि EdgeTalk एक मा केन्द्रित विषय.
देशभरका विज्ञहरूसँग, यो अन्तर्वार्ताको लागि स्टुडियोमा जानको लागि सबैको तालिका सन्तुलनमा राख्न लगभग असम्भव छ, यद्यपि! हामीले यो गर्ने सब भन्दा राम्रो तरिका निर्णय गर्‍यौं यसलाई एक साइड प्रोजेक्ट बनाउनुका साथै स्काइप र ग्यारेजब्यान्ड प्रयोग गरेर यो सबै सँगै पुल। हामीले अग्रगामी ब्राड शूमेकरको सहयोगलाई सूचीबद्ध गरेका थियौं रचनात्मक ज़ोंबी स्टुडियो हाम्रो विज्ञापन, परिचय र outro को निर्माण गर्न। ब्राडले मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको ब्यान्ड पनि प्रयोग गर्‍यो, मृत जोड्नुहोस्, पृष्ठभूमि संगीत मा!
हामीले त्यसपछि कल रेकर्डिंग विधाहरूको समूहको परीक्षण गर्‍यौं र वास्तवमा पायौं कि स्काईप कल रेकर्डिंग सजिलो विधि थियो। हामीले भेट्टायौं एक्कामबाट स्काईपको लागि कल रेकर्डर one २। .29.95 of को एक पटकको शुल्कका लागि स्पट थियो! रेकर्डर पप अप हुन्छ र प्रत्येक कलको साथ स्वचालित रूपमा सुरु हुन्छ - दुबै भिडियो र अडियो रेकर्ड गर्दै। त्यसो भए - यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईं यस तरिकाले भिडियो अन्तर्वार्ताहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ!
हामीले एक टन माइक्रोफोनको परीक्षण पनि गरेका छौं र हामीले पत्ता लगाएका सजिलो र प्रभावशाली सेटअपहरू मात्र प्रयोग गर्दैछौं Logitech ClearChat Comfort / USB हेडसेट। यस्तो देखिन्छ जब मसँग प्रदर्शन स्पिकरको अडियो बाहिर आउँछ, यसले वास्तवमा रेकर्डि recording गडबडी गर्दछ त्यसैले म केवल हेडसेट प्रयोग गर्दछु।
अर्को चरण भनेको ग्यारेजेन्डमा रेकर्डि। तान्नु हो। म केवल फाइललाई ट्र्याकमा तान्दछु र सबै अडियो फेला पार्छु जुन मैले ट्र्याकलाई विभाजन गरेर र अनावश्यक ध्वनिहरू मेटाएर हटाउन चाहन्छु। म त्यसपछि हाम्रो अडियो परिचय, विज्ञापन, र outro आयात गर्दछ। म ट्र्याकहरू विभाजित गर्छु जहाँ म विज्ञापन जान चाहन्छु र प्रत्येक ट्र्याकमा प्रत्येक ध्वनिलाई ड्र्यागमा एक अर्काको साथ ओभरले गर्नका लागि।
हामीले निर्माण गरेको फराकिलो ग्राहक आधारका कारण BlogTalkRadio, हामी त्यहाँ होस्ट र हाम्रो पोडकास्ट प्रचार गर्छौं र यसलाई आइट्यून्स, स्टिचर, र अन्य स्थानहरूमा वितरण गर्दछौं। BlogTalkRadio यसको आफ्नै स्टूडियो छ तर यो एक वास्तविक समय, प्रत्यक्ष रेकर्डर अडियो संग मुद्दा समाधान गर्न कुनै तरिका बिना। हामीले थुप्रै पोडकास्टलाई बिगार्न सकेका छौं तिनीहरूलाई लाइभ गर्न कोशिस गर्दै!
यहाँ परिणामहरू छन्:
ड्रु बर्नहरू अन्तर्वार्ता
स्कट ब्रिंकर साक्षात्कार
यसमा एउटा नोट - हरेक चोटि म यसमा ग्यारेजब्यान्डमा राम्रो देखिन्छु, उनीहरूले इन्टरफेस र विधिहरू परिवर्तन गर्दछन्। ड्राइभ मलाई नट!
यो अहिलेको लागि पर्याप्त छ। ब्राड र म भविष्यको लागि हेर्दै छौं जहाँ हामी वास्तवमै साइट र घटनाहरूमा केही उपकरणहरू ल्याउन सक्छौं - र ब्राडले अडियो मिश्रण गर्न सक्दछ र उचित स्टुडियोबाट टाढाको उचित स्तरहरू सुनिश्चित गर्न सक्दछ। यो एक लगानी को एक बिट हुन गइरहेको छ, तर मूलतः हामीलाई एक पोर्टेबल स्टूडियो प्रदान गर्दछ जुन हामी कहिँ पनि प्रयोग गर्न सक्दछौं - हाम्रो कार्यालय वा केही सम्मेलन केन्द्रबाट। जबसम्म हामीसँग ब्यान्डविथ छ, हामी एक पेशेवर पोडकास्ट सँगै राख्न सक्षम हुनेछौं।
टैग: ब्राड जुत्ता निर्माताबजेटरचनात्मक ज़ोम्बी स्टुडियोईकाम नेटवर्कग्यारेब्यान्डमार्केटिंग पोडकास्टपोडकास्ट मिक्स गर्नुहोस्पोडकास्ट अन्तर्वार्तापोडकास्ट रेकर्ड गर्नुहोस्रेकर्ड स्काइपरेकर्ड स्काइप साक्षात्कारस्काइप रिकॉर्डरस्काइप रेकर्डिंग